China Custom Logo Sleeve Long Women'S Hoodie PY-WW003 fanamboarana sy orinasa | Pinyang
Akanjo akanjo ba miloko marevaka ho an'ny lehilahy sy vehivavy
Karazan-damba inona avy no safidiana amin'ny fanaingoana akanjo ba ririnina? Fahalalana ny lamba namboarina ho an'i Hoodie
Ao amin'ny Hoodie namboarina dia misy karazana lamba ahafahantsika misafidy eny an-tsena, fa inona kosa ny lamba Hoodie izay mifoka sy mifoka rivotra kokoa? T customization T Club dia hitondra anao hahatakatra ny toe-javatra misy ny lamba Hoodie eny an-tsena.
Volon'akanjo akanjo ba namboarina - lamba cashmere
Ny Cashmere tenany dia tsy fehezanteny mahazatra, fa anarana fampiasa matetika amin'ny orinasa. Ny antony antsoina hoe cashmere dia satria cashmere artifisialy izy io, ka cashmere no iantsoana azy fa tsy volon'ondry. Ny Cashmere dia tsy lafo toa ny volon'ny zanak'ondry, fa misy vokany mafana tsara, tsy latsaky ny volon'ny zanak'ondry. Noho izany, be mpampiasa amin'ny indostrian'ny akanjo izy io. Safidin'ny mpampiasa maro ny manamboatra ny Hoodie. Damaody koa ny hafana.
Akanjo mahazatra - akanjo vita amin'ny landihazo madio
Ny landihazo madio dia vita amin'ny fibre landihazo. Ny fibre vita amin'ny landihazo dia manana hygroscopicity tsara, fiasan-tsakafo tena tsara, afaka mandray hatsembohana ary hanavao ny hoditra. Ny akanjo vita amin'ny landy madio dia malefaka sy mahazo aina tokoa. Ny lamba landihazo madio dia mazàna maina raha mikasika, maivana ary manana fatran'ny rivotra tsara kokoa. Mahatsiaro mangatsiaka amin'ny vatana izy ireo ary mety amin'ny fanaovana akanjo fahavaratra. Na izany aza, ny lamba landihazo madio dia manana iray amin'ireo tombony lehibe indrindra, dia ny fifoka ny hatsembohana sy ny fifindran'ny rivotra. Ny lesoka fotsiny dia mora ketrona izy ireo.
Lamba namboarina ho an'ny akanjo ba - volon'ondry polar
Ny volon'ondry polar dia karazana lamba voatenona. Izy io dia rafitra kely vita amin'ny baoritra Yuanbao, izay tenona amin'ny milina boribory lehibe. Aorian'ny fanenomana, ny lamba volondavenona dia nolokoana aloha, ary avy eo namboarina tamin'ny fizotran-javatra sarotra isan-karazany toy ny napping, ny carting, ny fanetezana ary ny pelleting. Ny lafiny anoloana amin'ny lamba dia kosehina, ary ny voany mihozongozona dia matevina sy matevina, ary tsy mora ny manala volon'ondry sy pilina, ary ny lafiny aoriana kosa dia somary lava ary mitovy, Short villi, mazava endrika ary malefaka fluffy. Ireo akora ao aminy dia matetika polyester, fahatsapana malefaka.
Ireo karazana lamba Hoodie telo etsy ambony dia lamba mifoka sy hatsembohana tsara kokoa ho an'ny hoodies namboarina; raha mila fanazavana fanampiny momba ny fifantenana lamba amin'ny hoodies namboarina sy sakaizan'ny hoodies namboarina, azafady mifandraisa t Club customization serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera.
Akanjo baoty manify dia vita amin'ny fibre polyester 50% sy landy 50%. Izy io dia mahazaka ketrona ary mahazaka fanoherana. Manana elastika tsara sy fitoniana dimensional izy io. Tsy mora ny mandrehitra herinaratra mifono vy sy mijanona. Lamba mitambatra, ny lamba matevina kokoa, matevina. Afaka manao azy na lahy na vavy. Azonao atao koa ny manamboatra ny lamina, ny loko ary ny sary famantarana.
Karazana famatsiana: serivisy OEM Toerana niandohany: Jiangxi, Sina
Anaran'ny marika: PINGYANGYU Model Model: Py-WW003
Karazan-damba: fifangaroana landihazo Endri-javatra: MAINTY haingana, Anti-pilling, Anti-Shrink, Tsy misy kapa
Ara-nofo: 50% polyester，Teknika landihazo 50%: Natonta
Volavola: vanim-potoana nalahatra: fararano
Fombany: Akanjo mahazatra: halavany: ny hafa Karazana modely: Fomban'ny tanany matevina: Ny hafa
Vakana: V-hatoka lanja: 350g
Halavan'ny tananao (cm): Fotoana fitarihana santionany mandritra ny 7 andro: Manohana
Anaram-pamokarana: Custom fall fall v-neck sweatshirt Type Product: women sweatshirt
Teny lakile: vehivavy sweatshirt be loatra Gender: Vehivavy Lady Lady
Logo: Karazan-tsarimihetsika fanontana namboarina: Wear Causal
Item: OEM Service Custom habe: Custom haben'ny
Serivisy: Custom OEM ODM famaritana: Custom Custom Designs
A: Eny, ny mpanjifa mpanjifa dia manana traikefa 5 taona niasa tamin'ny tsena lamaody eropeana sy amerikana amin'ny drafitra famolavolana, fampandrosoana ary famokarana.
F: Momba ny habe sy ny loko.
A: Ekeo ny fanaingoana.
F: Inona ny fotoana itarihana iraisan'ny rehetra amin'ny fandefasana baiko?
A: Famokarana kely: 5-7 andro famokarana betsaka: 7-15 andro na miorina amin'ny qty anao.
F: Inona no azonao avy aminay?
A: vokatra tsara (famolavolana tsy manam-paharoa, milina fanontana mialoha, fanaraha-maso kalitao henjana) Factory
varotra mivantana (vidiny mirary sy mifaninana) Serivisy lehibe (OEM, ODM, serivisy aorian'ny famahanana, fandefasana haingana) Fakan-kevitra momba ny asa aman-draharaha matihanina.
Previous: Logo miloko mareva-doko Rew neck Women Sweatshirt PY-WH001
Manaraka: Drawstring Ho an'ny vehivavy lava volo lava Hoodie PY-WW004
Vehivavy lava-pandrefesana misintona lava sy marevaka ...
Fanontana amin'ny Loose Trend lohataona vehivavy Hoodie PY-WW002
Drawstring vehivavy matevina lava volo'S Ho ...